Tsy Afaka Niditra Tao Amin’ny Fihaonambe Tao Madrid Ny Fampitam-baovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2017 19:00 GMT
(Marihina fa tamin'ny 9 Martsa 2005 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Niresaka momba ireo fanontaniana mahasadaikatra momba ny fidiran'ny fampitam-baovao tao amin'ny fihaonambe i Martín Varsavsky, ilay vahinintsika tany amin'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny Demaokrasia sy Ny Asa Fampihorohoroana ary ny Fiarovana. Mpanao gazety maherin'ny telonjato sy arivo no nasaina hanatrika ny fihaonambe, saingy tsy nisy afaka niditra tao amin'ny efitrano fivoriambe izy ireo fa napetraka tao amin'ny trano fandraisam-bahiny tery am-pitan'ny arabe, izay nahafahan'ireo mpandray anjara naniry ny hitsidika sy nanome antsafa.
Tsy dia faly loatra i Martín, toa tsy mifanaraka mihitsy amin'ny fitsipika demaokratika ny tsy nahafahan'ny mpanao gazety nanatrika ity fivoriana ity. Indrisy fa nahatsapa ny sampam-pitsikilovana Espaniola fa tsy afaka nanome fiarovana azo antoka ho an'ireo mpitarika manerantany izy ireo raha toa ka tsy maintsy mampiditra ireo mpanao gazety ireo.
Tetsy andanin'izany, namahana bilaogy momba ilay vovonana ny bilaogera am-polony vitsivitsy izay nanatrika ny fihaonambe. Indro ary ny bilaogin-dahatsary navoakan'i Martín miresaka momba ny toe-draharaha.